Reny tokan-tena : Ahoana no handrindrana ny fiainana ?
Teny mamy ho an’i Neny
Ankalazaina amin’ny alahady ho avy izao ny fetin’ny reny, izay andro hahatsiarovana manokana ireo nahitana masoandro. Ireto avy àry ireo teny mamy sy firarian-tsoa ho an’i Neny amin’io fetiny io, avy amin’ireo ankizikely sendra ny gazety Jejoo …
Manazatra ny zaza hampiasa « pot » …
Dingana sarotra lalovana ny mamolaka ny zaza hanao maloto amin’ny « pot » kely sahaza azy, ho an’ny ray aman-dreny sasantsany. Inona àry no hatao raha sahirana amin’izay dingana izay, ary inona ny teknika arahina mba hampiravona ny olana ?
Coton-tige : Tsy azo ampiasaina intsony !
Fitaovana madinika tsy tapaka ao an-tokantranon’ireo manana zazakely ny « coton-tige », mba hanadiovana ny sofiny na ny orony.
Zaza manaikitra, inona no atao?
Rehefa tafaraka misangisangy iny, na koa rehefa sorena ny zazakelinao dia tsikaritrao fa manaikitra izy.
Ankizy manao raharaha…zaza hahomby rehefa lehibe
Rehefa asain’i Neny manao raharaha sy manampy azy ny ankizy ao an-tokantrano ao dia kamokamo sy mihisatra indraindray.
Fantaro ireo akora mitarika “allergie” eo amin’ny zazakely
Efa betsaka ireo karazana akora fampiasa amin’ny zazakely miparitaka eo amin’ny tsena ho an’ny reny sy ny zaza eto amintsika. Hampandroana zaza, hanorana sy hanamandinanana ny hoditry ny zazakely… . Misy ihany anefa ny tsara ho fantatra, mba hiarovana ny zanakao tsy ho tratran’ny tohina avy amin’ireny karazana akora ireny.
Ny ray sy reny no mifameno miara-mitaiza ny zanaka, raha ny tokony ho izy. Noho ny antony maro samihafa anefa, dia mety voatery hitaiza irery ny ankizy ny reny. Ahoana ary no handaminana ny fiainana andavanandro sy hamitana an’izay adidy izay raha toa ka tokan-tena ilay reny ?
Tsy miseho ho mafy be
Rehefa mandamina ny fandaharam-potoana dia tiana ampidirina ao anatin’ny andro iray daholo ny zavatra rehetra azo atao. Ekeo anefa fa tsy ho vita izany. Tsy ho voaenjikao avokoa ny asa, ny adidy rehetra, ny raharaha ao an-trano sy ny ankizy, fa tsy maintsy misy mandefitra ary ahemotra ho amin’ny ampitso.
Ny laharam-pahamehana ihany aloha
Alaharo araky ny maha-maika azy ny zavatra rehetra. Raiso an-tsoratra ny hariva , izay tena tsy azo iodivirana, momba ny asa sy ny ankizy, tokony hatao ny ampitso. Rehefa voarindra ireo dia ampidiro tsikelikely amin’izay ny ambiny rehetra
Amin’ny alina no manao raharaha
Ny tena tsara dia entina ny hariva ny laoka ho amin’ny ampitso maraina sy ny ampitso atoandro. Raha azo atao dia ketrehina iny alina iny ihany koa, mba tsy ho voatery hifoha maraina be loatra ny ampitso. Raha azonao atao dia mangalà olona hanao ny sasa-lamba sady mipasoka izany, mba ahafahanao mifantoka amin’ny fanaraha-maso ny fianaran’ny ankizy.
Tsy ny reny irery no tomponandraikitra amin’ny fanabeazana sy ny fitaizana ny ankizy. Raha mbola velon’aina soa aman-tsara ny ray, dia ifandrimbonana foana izany, na tsy miara-miaina intsony aza. Raha tsy azo ianteherana intsony kosa ny raim-pianakaviana, dia mba ihantana ny raibe, na renibe, ohatra, indrindra raha tena mbola kely ny ankizy. Ianao ihany no mamaritra izay andraikitra azon’ireo manodidina anao sahanina. Rehefa lehibebe ny ankizy dia azo ampanaovina raharaha, izay sahaza azy ireo. Sady fizarana ny asa ao an-trano izany no fampandraisana andraikitra azy ireo ihany koa.